इपिएलमा सर्वाधिक विकेट लिन सक्ने चार खेलाडी | Hamro Khelkud
काठमाडौं (हाम्रो खेलकुद) – बलिङ नेपाली क्रिकेटकै सर्वाधिक बलियो हतियार हो । नेपालको जितमा प्रमुख योगदान बलिङको रहँदै आएको छ । घरेलु र फ्रेन्चाइज लिगमा नेपाली बलरले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । फ्रेन्चाइज लिगमा ब्याटिङमा विदेशी खेलाडीको दबदबा रहेपनि बलिङमा नेपाली बलर हाबी हुँदै आएका छन् ।
शनिबारदेखि टियु मैदानमा चौथो संस्करणको एभरेष्ट प्रिमियर लिग (इपिएल) सुरु हुँदै छ । प्रायः सबै फ्रेन्चाइज टोलीले विदेशी खेलाडीमा ब्याटरलाई बढी प्राथमिकतामा राखेका छन् । कुनैपनि बलर सफल हुन मैदान र पिचले निकै प्रभाव पार्दछ । नेपाल स्पिनरको लागि बढी सहयोगी मानिन्छ । तर पछिल्लो समय टियु मैदानमा तीव्र गतिका बलरले त्यसलाई गलत सावित गर्दै आएका छन् ।
कोरोना महामारीको कारण टियु पिचलाई ६ महिना विश्राम, आउँट फिल्टमा हरियो घाँस र पिचमा दुबो हुँदा तीव्र गतिका बलरले भरपूर्ण फाइदा उठाउन सक्छन् । इपिएलमा सर्वाधिक विकेट लिन सक्ने चार खेलाडी खेलाडी यस प्रकार छन् ।
४.अभिनाष बोहरा (भैरहवा)
नेपाली क्रिकेट टोलीका तीव्र गतिका बलर अभिनाष बोहरा टि२० विशेष बलर हुन् । अभिनाष नेपाली टोलीमा टि२० विशेष बलरको दुई वर्षयता खेल्दै आएका छन् । अभिनाष डेथ ओभरका प्रमुख बलर हुन् । अभिनाषलाई पिचको बारे राम्रोसँग जानकार छ । जसको भरपूर्ण फाइदा उठाउन सक्छन् । अभिनाषले पछिल्ला दुई घरेलु प्रतियोगिता प्रधानमन्त्री एकदिवसिय प्रतियोगिता र काठमाडौं मेयर्स कपमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका थिए ।
अभिनाष पिएमकपमा ५ खेलमा १४ विकेट लिँदै सर्वाधिक विकेट लिने सूचिमा शीर्षस्थानमा थिए । ओमान भ्रमणमा अभिनाषले मौका पाएका थिएनन् । त्यसले गर्दा अभिनाषले थप उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने सोचमा छन् । डेथ ओभरमा उत्कृष्ट प्रदर्शनका साथ सर्वाधिक विकेट लिने बलर बन्न सक्छन् ।
३. करण केसी (विराटनगर)
नेपाली टोलीका तीव्र गतिका बलर करण केसीले विराटनगरको कप्तानी गर्ने छन् । करण तल्लोक्रममा ठूला सट प्रहार गर्नेछन् । विराटगरलाई शीर्ष चारमा रहेर प्लेअफ खेल्न करणको प्रदर्शन निकै महत्वपूर्ण हुनेछ । करण दबाबमा अझ राम्रो प्रदर्शन गर्नेगर्दछन् । उनले नयाँ र पूरानो दुबै बलमा उच्च प्रदर्शन गर्न सक्छन् ।
करणको बलमा बाउन्स पनि छ । ओमान भ्रमणको अन्तिम खेलमा घरेलु टोलीविरुद्ध ४ विकेट लिँदै करण उच्च मनोबलका साथ स्वदेश फर्किएका छन् । टियुको पिचमा भरपूर्ण फाइदा उठाउँदै सर्वाधिक विकेट लिने बलर बन्न सक्छन् ।
२. केज्रिक विलियम्स (पोखरा)
वेस्टइन्डिजका तीव्र गतिका बलर केज्रिक विलियम्स यस सिजनको इपिएलमा विदेशी बलरको रुपमा सर्वाधिक ठूलो नाम गरेका खेलाडी हुन् । भारत, पाकिस्तान, न्युजिल्यान्ड, इंग्ल्यान्ड लगायतका विश्वस्तपरय टोलीविरुद्ध उत्कृष्ट प्रदर्शन गरि सकेका विलियम्स इपिएलका विपक्षी फ्रेन्चाइज टोलीलाई घातक बन्न सक्छन् । केज्रिकको बलमा अनुशासित लाइन र लेन्थ छ । विपक्ष खेलाडीको कमजोरी पत्ता लगाउँदै त्यहिँ अनुसार बल गर्नेगर्दछन् । उनीसँग विश्वस्तरिय खेलाडीसँग खेलेको अनुभव छ । जसको भरपूर्ण फाइदा उठाउँदै सर्वाधिक विकेट लिने बलर बन्न सक्छन् । उनले वेस्टइन्डिजबाट २६ टि२० आई खेलमा ४१ विकेट लिएका छन् ।
१.सन्दीप लामिछाने (काठमाडौं)
काठमाडौं किंग्स इलेभेनका कप्तान सन्दीप लामिछाने यस इपिएलमा घातक बन्न सक्ने बलर हुन् । विश्वस्टार सन्दीप पछिल्लो समय उत्कृष्ट लयमा छन् । ओमान भ्रमणमा सन्दीपले ६ खेलमा १८ विकेट लिँदै उच्च मनोबलका साथ फर्किएका छन् । स्वदेशी र विदेशी दुबै खेलाडीको कमजोरी सन्दीपलाई राम्रोसँग थाहा छ । इन्डियन प्रिमियर लिग देखि क्यारेविन प्रिमियर लिग जस्ता विश्व प्रसिद्ध फ्रेन्चाइज लिग खेलेका सन्दीपलाई राम्रो अनुभव छ ।
सन्दीपको बलको सामना गर्न विपक्षी टोलीका खेलाडीलाई केहि मनोबल दबाब पनि पर्नसक्छ । त्यसको सन्दीपले भरपूर्ण फाइदा उठाउँदै सर्वाधिक विकेट लिने बलर बन्न सक्छन् ।